Uumiga biyaha: astaamaha, isticmaalka iyo muhiimadda | Saadaasha Shabakadda
Jarmal Portillo | 31/03/2021 09:33 | Saadaasha hawada
El uumiga biyaha waa wax aan ka badnayn xaalad biyo socod markii ay ka gudubto heerka dareeraha una gudubto xaalada gaaska. Si uumi-biyoodku u dhacaan, waa in lagu gaadhaa heer-kul u dhow barta karkarinta. Gaaskaani wuxuu muhiim u yahay wareegga biyaha, sameynta nolosha iyo kuleylka adduunka.
Sidaa darteed, waxaynu si qoto dheer ugu lafaguri doonnaa uumiga biyaha, astaamahiisa iyo muhiimadiisa.
2 Abuurista uumiga biyaha
3 Adeegsiga uumiga biyaha
4 Muhiim ah
Ma aha wax kale oo aan ahayn waftiga xaalad biyo markii ay waji ka beddeleyso xaaladdan dareeraha ah una gudubto gobolka gaaska. Uummadani waa mid aan midab lahayn oo aan ur lahayn, in kasta oo ay badiyaa hesho muuqaal cad oo daruur leh markii lagu dhex milmo dhibco yar oo biyo ah oo ku jira xaalad dareere ah. Uumiga biyaha sidoo kale waxay yareyn kartaa muuqaalka iyadoo kuxiran cufnaanteeda iyo halka aad joogto. Tusaale ahaan, waxaan aragnaa in uumiga biyaha si fiican loo arki karo marka aan ka soo baxno qubayska oo aan xirno daaqadaha musqusha. Halkani waa meesha uumiga biyuhu ku ururaan oo uu dareere u noqdaa markuu darbiyada ku dhego.
Dabeecadda, uumiga waxaa la soo saaraa marka biyaha dhulka hoostiisa lagu kululeeyo iyada oo loo marayo hababka fulkaanaha qaarkood. Nidaamyadan fulkaanaha waxaa ka dhasha biyo kulul, geys, fumaroles, iyo noocyada fulkaanaha qaarkood. Geysers waa nooc gaar ah oo gu 'kulul. Steam sidoo kale waxaa lagu soo saari karaa si farshaxan ah iyada oo loo marayo nidaamyada teknolojiyadda sida kuleylka kuleylka shidaalka iyo tamarta nukliyeerka. Sidan oo kale, waxaan ognahay taas Uumiga biyuhu waa il muhiim u ah tamarta warshadaha. Waana inta badan geeddi-socodka sameynta ee soo-saarista korantada tixgelinta awoodda uumiga biyaha inuu dhaqaajiyo marawaxadaha.
Waxaa laga dareemi karaa maalin qoyaan badan, ceeryaanta taagan xilliyada waaberiga ama marka deegaanku qabow yahay hawaduna lixaad ka gasho afka. Hawada afka ku jirta waxay ka kooban tahay qoyaan iyo biyo la magdhabo marka lala kulmo hawo qabow.
Abuurista uumiga biyaha
Aan aragno waxa geeddi-socodka ugu muhiimsan ee uumiga biyuhu ka dhasho. Karkarinta biyaha waa geedi socod jir ahaaneed kaas oo cunsurkan uu isku badalayo dareere una gudba xaalad gaas taasoo ka dhalata soo-gaadhis dheer oo kulayl daran. Heerkulka karkaraya ee biyaha waa 100 darajo. Waa heerkulkaas ay biyuhu bilaabaan inay karkaraan. Si kastaba ha noqotee, biyuhu maahan inay noolaadaan si uumiga biyuhu u jiro.
Marka dareeruhu gaaro barta wax lagu kariyo, wuxuu qaadaa kuleylka si uu dareeraha ugu beddelo uumi, laakiin heerkulkiisu mar dambe ma sii kordhayo. Dhammaan biyaha dareeraha ahi waxay ku dambayn doonaan inay isku beddelaan uumi ilaa inta cabirka dareeraha ahi dhammaado. Waxaan u aragnaa howshan mid aad u fudud markaan karno biyo dheriga dhexdiisa. Waa inaan sidoo kale ogaano in heerkulka karkaraya ee biyuhu ay kuxirantahay cadaadiska loo sheegay walaxda la hoos galiyay. Tusaale ahaan, makiinadda wax karisa ee kariska wax lagu karsado waxay u dhacdaa si dhakhso leh iyadoo la fiirinayo cadaadiska ka imanaya dheriga laftiisa, heerkulka karkaraya ee biyaha ayaa hooseeya.
Adeegsiga uumiga biyaha
Sida aad filan karto, uumiga biyuhu wuxuu leeyahay adeegsiyo kala duwan oo meelo badan ah. Aan aragno waxa isticmaalkan oo dhami yihiin:
Jeermiska ka dhig cuntada: uumiga biyaha waxaa loo isticmaalaa in lagu baabi'iyo noolaha ku jira cuntada. Inta badan noolaha waxay dhintaan markii ay la kulmaan heerkulka sare. Sababtaas awgeed, uumiga waxaa loo isticmaalaa in lagu nadiifiyo biyaha ama walxaha qaarkood sida guryaha loo isticmaalo in lagu daboolo khasaaraha.
Hawlgalka mishiinka: Waxaa jira matoorro badan oo la shaqeeya gubidda shidaalka foosha oo u beddelaya tamarta kuleylka ee qadar biyo ah tamar farsamo. Tani waa sida matoorada uumiga u shaqeeyaan.
Atomis atomis-ka ayaa ah wax aan ka badnayn kala-goynta qaybo yaryar. Waa nidaam u oggolaanaya walaxda in loo qaybiyo qaybo aad u yar. Waxa kale oo aad adeegsan kartaa farshaxanka farshaxanka oo u oggolaanaya dareeraha inuu ku faafo adoo soo bandhigaya dhibco aad u yar sida buufinta.
Nadiifi: biyaha waa miraha caalamiga ah. Biyaha waxaad ku nadiifin kartaa wax kasta oo nooc ah. Steam sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa nadiifinta. Iyada oo loo adeegsanayo aaladaha adeegsada tiknoolajiyadda uumiga ee la cadaadiyay, waxay u oggolaaneysaa in la kordhiyo awoodda oo la nadiifiyo dhammaan astaamaha isku dhafan sida kuwa ku soo ururay roogagga, alaabta guriga ama dharka.
Qoyaanka: Habka karinta uumiga ayaa si weyn loogu talinayaa dhammaan cuntooyinka caafimaadka leh maadaama ay u oggolaaneyso in la ilaaliyo fiitamiinnada, nafaqooyinka iyo dareeraha cuntada.
Qoyaan qaar badan oo ka mid ah qalabka huurka ayaa awood u leh inay hagaajiyaan xaaladaha deegaanka iyagoo kordhinaya qoyaanka. Waxaa jira dhowr nooc oo huuriyeyaal oo kuxiran hadday uumi baxaan biyaha ultrasound-ka ama kuwa kuleylka ku sameeya. Kuwan dambe ayaa ka doorbid badan in la isticmaalo xilliga qaboobaha maadaama ay sidoo kale wax yar kordhiso heerkulka daarta.
Sidii aan ku soo sheegnay bilowgii maqaalka, uumiga biyuhu aad ayuu muhiim ugu yahay dabeecadda. Joogitaanka jawiga waa mid ka mid ah kuwa ugu habboon. Waana in qayb muhiim ah oo ka mid ah wareegga biyo-baxa ay ku jiraan tiro is-bedbeddelaya. Celceliska isku-uruurinta jawiga ayaa ku dhow 3%. Gobollo badan oo oomane ah ama aad u qabow sida tiirarka, isku-uruurintu way hooseysaa.
In kastoo aan lagu arki karin isha qaawan, maalin cad waxaa jira uumiga biyaha. Sababtoo ah waa gaas aan midab iyo ur midna lahayn, si toos ah looma arko dareenka, ka duwan daruuraha ka dhasha dhibcaha biyaha dareeraha ah waana sababta loo arki karo. Waa gaaska aqalka dhirta lagu koriyo ee ugu badan ee ku jira jawiga waana kan ugu awooda badan dhamaantiis sababtoo ah qaab dhismeedka kiimikada. Markasta oo meeraha kululaado, uumi-biyood badan ayaa hawada ku jiray maadaama heerka uumi-baxa badaha, harooyinka iyo biyaha kale ee adduunka ay kordheen.
Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad wax badan kaga baran karto uumiga biyaha iyo astaamahiisa.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Uumiga biyaha